Wararka Maanta: Arbaco, Jan 9 , 2013-Wasiiradda Wasaaradda Horumarinta iyo Adeegga Bulshada iyo xubno ka tirsan dowladda Turkey ah oo Magaalada Muqdisho soo gaaray
Wasiiradda iyo wafdiga la socday ayaa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho wasiirro, xidlhibaanno, agaasimeyaal, bahda isboortiga ee GOS iyo dadweyne kale, iyadoo wasiirraddu ay saxaafadda kula hadashay garoonka diyaaradaha.
“Muddadii aan maqnaa waxaan kulammo lasoo qaatay; ra’iisul wasaare ku xigeenka Turkiga, wasiirka caafimaadka, wasiirka arrimaha qoyska, wasiirka waxbarashada iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Turkiga, waxaana dhammaantood kala hadlay qodobbo khuseeya iskaashiga labada dal iyo taakuleynta shacabka Soomaaliyeed,” ayay wasiiraddu ku sheegtay shirkii jaraa’id ee ay saxaafadda u qabatay.
Sidoo kale, wasiirraddu waxay sheegtay inay booqasho ku tagtay intii ay joogtay dalka Turkiga meelaha ay ardayda Soomaaliyeed ee dalkaas ku sugan ay wax ka bartaan, ayna u riyaaqday sida ay wax u baranayaan.
“Dalka Tuuniisiya waxaan waxaan kaga qaybgalay kulan looga hadlay wax-barashada, madaxdii kulankaas kasoo qayb-gashay waxaan kala hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya Soomaaliya,” ayay wasiiraddu hadalkeeda ku dartay.
Ugu dambeyn, wasiirraddu waxay sheegtay in wafdiga ka socda Turkiga ay doonayaan inay booqdaan wasaaradda horumarinta iyo adeegga Bulshada ee Soomaaliya si ay ugu kuurgalaan howlaha ay bushada Soomaailyeed u hayso.